Pagelines: Dọrọ na dobe WordPress Okwu | Martech Zone
Thursday, May 12, 2011 Sunday, Jenụwarị 19, 2014 Douglas Karr
O doro anya na, m na-agwa ụlọ ọrụ n'ụtụtụ a okwu banyere mgbagwoju anya nke isiokwu ha n'ime WordPress. Maka ndị dị ka anyị bụ ndị mmepe PHP, emeela ọtụtụ isiokwu na plugins ma ghọta WordPress API, ọ bụghị ihe ọjọọ. O bu ihe nwute, nke ahu erutaghi otutu ulo oru na ndi mmadu. Isi okwu - inwe ịkpọ onye nrụpụta oge ọ bụla ịchọrọ igbanwe nhazi ma ọ bụ isiokwu gị nwere ike ịdị ọnụ!
PageLine na-agbanwe nke a na ngwaahịa ha, PlatformPro. Ebumnuche ihu-ihu nke nyiwe gbadoro gbadoro gbakwunyere ngalaba. Na nkenke, ngalaba dị ka wijetị WordPress (drag-na-dobe sidebar ọdịnaya) naanị ha na-arụ ọrụ nke ọma maka ịmepụta atụmatụ dị ukwuu na iji ndebiri. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị mere ngalaba ji dị egwu:
Ngalaba nkwụnye na Egwuregwu bụ ihe ndị e mere tupu oge a, nke nwere ike ịdị mgbagwoju anya (dịka ihe mmịfe atụmatụ, igodo, carousel, wdg.). Koodu niile ka nwere ma jikwaa ya na ngalaba API; ya mere ihe niile ị hụrụ mgbe ọ bụla bụ mfe ịdọrọ na dobe interface na nhọrọ.
Ngalaba njikwa nwere ike ịtụgharị ma ọ bụ gbanyụọ na ibe peeji ma tinye ụdị post na nhọrọ nke ha. Nke a pụtara njikwa zuru oke nke ibe ọ bụla na saịtị gị.
Mmepe nwere ike ịmepụta ma gbanwee ya site n'aka ndị nrụpụta na isiokwu ụmụaka. Nke a pụtara na ndị nrụpụta nwere ike itinye ma ọ bụ gbanwee ngalaba ịdọrọ & dobe na sekọnd.
Ngalaba Dị Mfe tinye akara ngosi HTML na ọkọlọtọ omenala (maka ịgbatị ọrụ). Nke a na-ebelata ọtụtụ koodu mgbe ị na-enyekwu gị ọrụ n'otu oge.
Atụmatụ ndị ọzọ ị ga-ahụ n'anya
Nrụpụta Ihe Nhazi - N'elu ngalaba ịdọrọ & dobe, Platform nwekwara draịvaị nwere ike ịhazi ya maka ịhazi akụkụ nke saịtị gị. Nwere ike ịhọrọ obosara saịtị ọhụrụ, ma ọ bụ hazie nke ọ bụla n'ime usoro ntanetị 5 dị iche iche; wee họrọ ntọala na peeji nke-ibe-peeji.
bbPress na BuddyPress - Platform na-akwado njikọta na BuddyPress ma nwekwa bbPress forum isiokwu (mbipụta onye nrụpụta). Mwekota ahụ enweghị nkebi ma na-enye ndị ọrụ Platform ezigbo ndị ọrụ na ịdị ike.
Uzo zuru ezu na nke edoziri - PageLine agụwokwa ụdị usoro dị iche iche. E nwere ụzọ abụọ iji wuo saịtị gị na Platform. Ọnọdụ obosara zuru oke na-enye gị ohere ịnweta ọdịnaya ọdịnaya zuru oke (dịka ihe ndabere), na ọnọdụ obosara na-enye gị ọdịnaya zuru oke na ihe ndabere.
Isi Isiokwu Childmụaka - Ewubere isiokwu nwata iji nyere gị aka ịhazi Platform dị mfe yana omume kacha mma maka iwulite weebụsaịtị. Jiri ya ka ị tụfuo ụfọdụ ụdị CSS, ma ọ bụ jiri 'nko' tinye koodu dịka HTML ma ọ bụ PHP n'ebe niile n'isiokwu ahụ. Ha ewukwala n’ụzọ dị mfe iji tinye ngalaba nke gị!
Ịnye ọnụahịa - Ọnụ ego otu ikikere pro ga-efu $ 95. A ga-ere akwụkwọ ikike iji mepụta ihe maka $ 175, nke gunyere ndakọrịta na bbPress forum, eserese na njikọ ewepụrụ.
Tags: datasiftozi emailgeo-ezubere icheVidio Ahịamobile ọtụtụ-ọwa
Mee 12, 2011 na 8: 29 PM
Platform bụ nnukwu ngwaọrụ maka itolite na WordPress! Guysmụ okorobịa a na-arụ ọrụ na-egbu egbu site n'ime ka sọftụwia ha dị mfe iji yana gụnyere atụmatụ karịa ka ị nwere ike ikwanye nnukwu nnukwu osisi na
Jide nke ọma. Enweghị ike ichere ịhụ ihe ga-esote!
Mee 13, 2011 na 12: 59 AM
Nnukwu nyocha Doug! M gafere PaltformPro n'izu gara aga ka m na-agụ nettuts + blog ma na-eche ma ọ bụrụ na ọ bụ nnukwu isiokwu. Ọ dị m ka ọ bụ eziokwu, mana obi dị m ụtọ ịhụ ihe ọ ga-eme. Ọ nwere ike ịgbanwe ụzọ m si eke saịtị ma ọ dị ka ọ nwere ike ịchekwa m ọtụtụ oge.
Daalụ maka votu nke ntụkwasị obi a!
Mee 15, 2011 na 4: 40 AM
great article Doug, Naanị m zụtara nke a maka saịtị buddypress m na-eme. M nwere esenidụt imewe Ihọd na-arụ ọrụ na ya ugbu a. Ana m atụ anya na ọ ga-eme
Jenụwarị 7, 2012 na 3:27 PM
hi i nwere ajụjụ: ọ ga - ekwe omume itinye menu ọzọ na akara peeji, menu aka ekpe na aka ekpe ma tinyekwa iwu nzuzo na njikọ njikọta n'okpuru ụkwụ? n'ihi na ime nke a na wordpress siri ike.
Jenụwarị 7, 2012 na 3:34 PM
Ndewo Perla - ị pụtara na Pagelines ma ọ bụ jiri naanị isiokwu WordPress? Site na isiokwu WordPress, ọ dị mfe ịtinye menu ọzọ na nkwupụta ụkwụ n'okpuru mana ị ga-achọ onye ga - eme idezi ya na isiokwu gị ma nke ahụ maara ụzọ ha gburugburu WordPress. Enwere ọtụtụ ndị bekee nọ ebe ahụ na-eme ya, agbanyeghị. Aga m achọ 'onye nrụpụta okwu' na mpaghara gị na Google wee hụ ihe ị hụrụ!
Jenụwarị 7, 2012 na 5:33 PM
hi i have a question: ọ ga-ekwe omume itinye mgbakwunye menu na ibe
akara, menu aka ekpe na aka ekpe ma tinyekwa iwu nzuzo na nkwupụta
njikọ na n'okpuru? n'ihi na ime nke a na wordpress siri ike
. m na-ekwu banyere pagelines
Jenụwarị 7, 2012 na 5:35 PM
m pụtara na ahịrị peeji
Jenụwarị 7, 2012 na 5:58 PM
Nwere ike ịgbakwunye otu ebe HTML na ụkwụ ebe ị nwere ike itinye ozi ahụ. Amaghị m na menu nke abụọ. Nke ahụ nwere ike ịchọ ọrụ ụfọdụ!